Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : Give meabreak!
ဒီတခါ ငွေစင်ရော် ရဲ့ Give meabreak! အစီအစဉ်မှာ ခံစားမိတာလေးကိုထုံးစံအတိုင်းပဲ
ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင်(Benjamin Franklin)- အမေရိကန်လူမျိူး သိပ္ပံပညာရှင်၊
ပတ်သက် နေတဲ့စာကြာင်းလေးက ဒီလိုပါ။
don’t give too much for the whistle တဲ့။
တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်လျှင် ”၀ီစီလေးအတွက် တန်းဖိုးများများ မပေးပါနဲ့”ဟု
စာပိုဒ်၏နက်နဲပုံ ”The whistle” ဟူ သောစာလုံး၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုပို၍
ဤစာပိုဒ်ကိုရေးသားသူမှာ ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင်(Benjamin Franklin.U.S.A.1706-1790)
”As I grew up , came into the world, and the action of men,
I thought I met with many, very many, who gave too much for the whistle”
အော် ဒီလူဟာဝီစီလေးအတွက် ဒီလောက်တောင်ပေးရတာသနားဖို့
ပါတယ်။ ဒီလူ့နှယ့်နော် ၀ီစီလေးအတွက်ဒီလောက်တောင်ပေးရသလား။
ဒီမိန်းကလေး သနားစ ရာပါလား။၀ီစီလေးအတွက်ဒီလောက်တောင်ပေးဆပ်
Posted by Junior Win at 2:05 AM
ဘင်ဂျမင်ဖရင်ကလင်၏madame Brillonထံသို့ပြန်သောစာတစ်စောင်ပါ ၀ီစီလေးအတွက်တန်ဖိုးကြီးကြီး မပေးပါနဲ့ ဟူသောအမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်မ၏သဘောထားသည်ဘင်ဂျမင်ရေးထားသကဲ့သို့ခံစားမိပါ သည်။ ထို့ကြောင့်ဘင်ဂျမင်၏အမြင်အတိုင်းသူ့အရေးအသားအတိုင်းပင်ကိုးကားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Give meabreak!(We love our country - part 1)
selection 8 - ဂျူနီယာဝင်း